KOMAKOMITI Vagadziri uye vatengesi - China KOMAKONI Fekitori
DZIMWE DHOMU KUKWANA GURU
Bonovo Kukwirisa vhiri kunobatsira kuverengera kuti kukwira mugero kunoitwa nekukurumidza uye zvinobudirira kupfuura muchina unodederesa. Ivo vanokwanisa kuita zvakawanda nekushomeka kupfeka uye kubvarura pane anoshanda uye muchina. Bonovo compaction mavhiri akagadzirirwa kuita uye kuvaka kuti igare.
Bonovo Plate Compactor inoshandiswa kumanikidza mamwe marudzi evhu nejecha yezvirongwa zvekuvaka zvinoda kugadzikana subsurface.it inogona kushanda zvine mutsindo chero kupi zvako excavator yako kana backhoe boom inogona kusvika: mumateneti, pamusoro uye kutenderera pombi, kana kumusoro kwepepa uye pepa murwi. Inogona kushanda padhuze nenheyo, kwakatenderedza zvipingamupinyi, uye kunyangwe munzvimbo dzakatenuka kana nzvimbo dzakaomarara uko kwakajairika ma roller nemimwe michina isingagone kushanda kana zvingave zvine njodzi kuyedza. Muchokwadi, iyo Bonovo's plate compactors / madhiraivha anogona kuchengetedza vashandi hurefu hwakazara kubva mukumanikidza kana kutyaira chiitiko, kuve nechokwadi chekuti vashandi vari kure nenjodzi yemapako-ins kana michina yekubata.